Suldaankii BEESHA HABAR GIDIR ee taageersanaa AL-SHABAAB oo la dilay - Caasimada Online
Home Warar Suldaankii BEESHA HABAR GIDIR ee taageersanaa AL-SHABAAB oo la dilay
Jamaame (Caasimada Online) – Wararka laga helayo gobollada Jubooyinka ayaa sheegaya in duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday Jamaame lagu dilay suldaankii beesha Habar Gidir ee taageersanaa dagaalyahanada Al-Shabaab.
Warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab ayaa baahiyay in suldaanka lagu dilay duqeyn ay fulisay diyaarad kuwa aan duuliyaha laheyn, waxeyna magaciisa ku sheegeen suldaanka Maxamed Cabaas.
Sida ay sheegaan kooxaha aruuriyaha xogaha duqeymaha ay ciidamada Mareykanka ka fuliyaan Soomaaliya, tan iyo markii la doortay madaxweyne Donald Trump oo maalmo kadib xafiiska baneyn doono, waxaa kordhay duqeymaha.
Sidoo kale duqeyntaan ayaa kusoo aadeysa xilli ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa Soomaaliya laga saaray, wuxuuna ahaa amar ka yimid madaxweynaha wakhtigiisa dhamaaday ee Donald Trump.
Sanadkii lasoo dhaafay ayey aheyd markii ay ciidamada Mareykanka duqeyn ku dileen suldaankii beesha Jareerweyne ee taageersanaa Al-Shabaab, kaas oo lagu magacaabi jiray Suldaan Cabaas.